Android Studio 4.0 na-abịa na atụmatụ 3 dị mkpa dị mkpa iji mepụta ngwa | Gam akporosis
Google weputara Android Studio 4.0
Google ekwuputala ọkwa nke Android Studio 4.0, ikpo okwu ya iji mepụta ngwa na gam akporo, naanị awa ole na ole gara aga ma ọ na-abịa na ụfọdụ karịa akụkọ na-atọ ụtọ. Ntị maka nchịkọta akụkọ mmegharị ya nke ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ịmepụta ahụmịhe ndị ọrụ nke oge a.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ ohere iji Java 8 asụsụ API Opekempe nke ngwa API adịghị arụ ọrụ. Ihe ikpo okwu nke doro anya na ọ bụ maka ndị mmepe ma ọ bụ ha bụ ndị maara mkpa ọ dị n'ime akwụkwọ ọhụụ ndị a.
Guysmụ okorobịa nọ na Google kwadoro nke ahụ Android Studio 4.0 bụ nsonaazụ nke ọtụtụ afọ nke ọrụ na-eweta ngwa ọrụ dị mma na nke ọhụrụ maka mmemme dị mfe, mepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa ndị ọrụ na-adabere maka ọrụ ha kwa ụbọchị na ekwentị ha.
A na-enweta ya ugbu a na ọwa siri ike, Android Studio 4.0 pụtara ìhè maka ihe ndezi ọhụụ gị, onye nyocha ihe nyocha iji chọta ihe kpatara iji nwayọọ na-ewu oge, yana Java 8 asụsụ API.
O nwekwara nyochaa interface njirimara CPU Profiler iji meziwanye usoro ọrụ ma kwado nyocha ya. Gụnyere mmezi nke Onye nyocha nke Layer nke na-eweta data dị ugbu a site na ngwa ngwa.
Anyị nwere ike ịbanye na nkọwa ndị ọzọ, mana anyị na-ahapụrụ gị njikọ ahụ ka ị wee mara ins na outs nke ihe di ohuru na Android Studio 4.0 na yabụ ị nwere ike melite ọrụ gị mgbe ị na - eme ngwa gị ma ọ bụ mepụta ndị ọhụụ. Site na njikọ a Google ebipụtawo akụkọ ya niile.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 gara aga mgbe Android Studio 3.0 bịarutere, ya mere, anyị nọ kechioma na ọ ga-abụ na a okwu nke ọnwa mgbe anyị na-amalite na-achọpụta ndị a ozi ọma na ụfọdụ nke ngwa anyị nwere na anyị mobile. Easierzọ dị mfe iji bịaruo nso na imewe ngwa na Android Studio 4.0.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google weputara Android Studio 4.0
AKWERKWỌ ANDROID: Kpachara anya maka StrandHogg 2.0 Malware CVE-2020-0096
Oku nke Ọrụ: Warzone's Gulag Coming to Mobile Version